Semalt: 4 Ụdị ndị ọkachamara SEO iji mekwuo arụmọrụ azụmahịa gị
N'ime afọ iri gara aga, ndị ọkachamara amatala ụdị dị iche iche ọkachamara SEO . N'ihi ahụmahụ dị iche iche, ọ ga-ekwe omume na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ngwakọta nke àgwà dị iche iche. Ihe oru ọ bụla kwesiri ido anya. Tupu ị na-ahọrọ onye ọrụ, onye kwesịrị ịma ihe ego ụlọ ọrụ ahụ chọrọ iji mee ihe, na ebe ebe ike dị.
Alexander Peresunko, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Nlekọta nke Semalt , na-atụle n'isiokwu ahụ ụdị ndị ọkachamara anọ ahụ, nke kwesịrị ịkọwapụta na mkpebi ịhọrọ otu maka mmejuputa SEO - email.med.cornell.edu.
1. Data / Ahịa
Ịghọta ma nyochaa nnukwu data data bụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ na-achọkwa ntụgharị uche nyocha. Ndị na-ada n'ime ụdị a nke ndị ọkachamara SEO nwere ụfọdụ akụkọ ihe mere eme nke nyocha data. Ha na-arụkarị ọrụ ha n'isi ha, ọ bụghị n'ọchịchị okike. Ndị ọkachamara SEO ndị a na-agbalịsi ike ịmepụta ntiwapụ site na ịkọkọta data, akwụkwọ ntanetị, ma jigide akụkọ ndị a pụrụ ịdabere na ya. Ha na-amụta site n'oge gara aga, ozi a nwekwara ike ịkọ ọdịnihu.
2. Nka na ụzụ
Ha na-abanye n'ọhịa mgbe ha nyesịrị mmasị na ibe weebụ. Ha enweghị ọchịchọ ịmara ihe dị n'azụ ihe ọmụma ahụ dị na saịtị ahụ. Ihe kachasị ha mkpa bụ ịmepụta ihe niile nwere ike igbochi ya. Ha na-ele anya na ntinye W3C, nchịkọta data, na nkọwa ndị ọzọ. Na ụdị SEO ndị a, na-atụ anya ụdị ụfọdụ nke njikarịcha na saịtị..Mkparịta ụka UI na UX bụ akụkụ nke ihe ha na-eme. Maka ngalaba ahịa nke ọ bụla nzukọ, SEO technology dị oké ọnụ. Ha na-achọkwa ihe karịrị naanị nhazi ntinye na WordPress, ma ọ bụrụ na ha ga-enwe ọganihu ọ bụla.
3. Ọdịnaya na Nkwupụta
Nke a SEO kachasị na-elekwasị anya bụ na njikarịcha na saịtị. Ha bu n'obi ịzụta okporo ụzọ site n'aka ọgbọ na njikọta ọgbọ. Ha na-anwale oru ngo mgbe niile iji chọpụta nke na-eweta ego ka ukwuu. Naanị ha nwere mmasị na ihe kachasị na-enweta okporo ụzọ maka saịtị ahụ nwere ike ịchụso ya ma na-agbaso ya.
4. General / Novice
Ha enweghi ahụmahụ ma nwee ụdị otu ụdị SEO. Ha na-eburu nkà site na SEO ngwaọrụ online wee jide ngwa ngwa n'ihi njikere ha ịmụta. The novice ga-abụ ihe dị mma maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na obere ego maka onye dị njikere ịrụ ọrụ n'ahịa niile. Ha na-arụsi ọrụ ike ma na-ekpuchi ihe dị mkpa.
SEO ma ọ bụ maka ụlọ ọrụ?
Ụlọ ọrụ na - agba mbọ ma ha ga - akwụ ụgwọ ma ọ bụ ịchọta ndị ọkachamara SEO site n'aka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọkachamara. Ụlọ ọrụ nwere otu uru karịa SEO n'ụlọ obibi dịka ha na-anọgidesi ike na usoro karịa nke mbụ. Ụlọ SEO hụ data dị ịrịba ama dabara na ụlọ ọrụ.
Ihe na-enye gị n'ụlọnga SEO ọnụahịa ahịa bụ na ha na-ele data onwe onye si n'ofe nke ụlọ ọrụ ahụ maka ọrụ dị iche iche. Ihe omuma di iche iche sitere na ihe jikotara data n'etiti ndi oru ahia ma obu ndi mmadu. Ha na-enyere aka ịkọwa na algorithm na-abịa ma ọ bụ dips.
Otu ihe dị mkpa n'ịgba ụlọ SEO n'ụlọ bụ ma ọ bụrụ na nzukọ ahụ dabere na SEO dịka isi iyi isi ego. N'okwu a, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya iji chekwaa ihe onwunwe, akụkọ ihe mere eme, na ihe ọmụma.
Ònye Ka Ị Bụ?
Site na nchịkọta nke ụdị SEO anọ ahụ, ọ na-adị mfe ịchọta ebe ebe njedebe dị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akụziri onwe ha SEO mgbe ha nọ n'ọhịa ebe ọ bụ na ọtụtụ n'ime ha na-amalite dịka ihe ọzọ. Ka o sina dị, e nwere àgwà nke anọ kachasị mma na njedebe.